1. Esi ida ibu ibu Ọ dị mkpa inyere ihu anyị aka ka ọ dị gịrịgịrị ma dịkwa mma, tinyekwara ọnụ ụzọ nke obi nke na-agwa ndị gbara gị gburugburu etu ị si elekọta onwe gị. Ọtụtụ mmadụ na-anwa ịchọta ụzọ ha ga-esi belata ibu ibu na-arụ ọrụ. Ma ruo mgbe ahụ!?! Fụrụ akpụ ihu, gburugburu gburugburu, plump cheeks, olu wattle ga-anọnyere anyị ruo ogologo oge. Ruo mgbe na-akpata nchegbu maka ụmụ nwanyị Ndi choro ida ihu ha n’iru Mana taa enwere m ike ịgwa gị nke ahụ Only maara naanị etu e si tufuo ihu (How to lose weight face) nke anyị na-eweta taa. Ihu gị ga-adị gịrịgịrị Ruo mgbe gị onwe gị nwere ike ịchọpụta
2. Belata oriri nke carbohydrates dị mfe dịka osikapa ọcha, shuga a nụchara anụcha, nri nri, ice cream, wdg, yana nri esiri esi. Kedu nke ga - enwe sodium dị elu Na-eme edema na ahụ na ihu Ma ọ bụ onye ga-atụfu ibu ihu site na iri obere-carb (Low-Carbs Diet) bụ igbochi nri ndị nwere nnukwu carb. Ma tụgharịa na nri ndị obere-carb maka naanị ụbọchị 14 n'usoro, anyị ga-amalite ịhụ nsonaazụ nke oke ibu ọnwụ nke ọma.
3. Na-emega ahụ niile Ọchịchị isi mkpịsị aka maka ifelata ibu gị bụ igbari abụba gabigara n’ihu gị. Kedu nke anyị nwere ike idafu ibu ihu anyị site na mmemme ndị na-ewepụta ume site na oke abụba Na-aga n'ihu mmega 15 nkeji n'ihu Na ọnụego obi nke 130-150 na-akụ kwa minit, nke ga - enyere aka mee ka abụba ahụ na agba gị ghara ịba ụba. Mgbe emere ihe dị ka ụbọchị iri atọ na-esochi ya na njiri nke carbohydrates dị mfe. Ọ ga - enyere anyị aka ida ibu ibu nke ọma.
4. Yoga maka abụba abụba abụba anụ ọkụ Ọ bụ ụzọ dị mfe iji felata ibu. Naanị anyị na-eme ọnụ, dicks, cheeks na egbugbere ọnụ. Wee gbue isi gị azụ. Site na ịgbatị olu na agba, na-ele anya n'uko ụlọ site n'ime ihe maka minit 10, ugboro 15 kwa ụbọchị, ụtụtụ na tupu ị lakpuo ụra ruo ụbọchị iri atọ, ga - enyere aka belata ibu ihu.
5. Ikwusi ịhịa aka n'ahụ Wayzọ a iji belata ibu ihu. Anyị na-eji usoro ịhịa aka ihu jikọtara ya na ude ụtụtụ na oge ụra. Naanị tinye ude ahụ isi 5 dị mkpa na ihu bụ ọkpọiso, agba, imi, agba ma jiri isi mkpịsị aka abụọ na agba. Tụọ ma debe ụlọ arụsị dị n'akụkụ abụọ. Jirizie mkpịsị aka ukwu gị nwayọ nwayọ Ghichaa ya n'ime ọdịdị V. Ekem, ke ini esịmde mfụk oro, enye ama ọtọn̄ọ ndifụk enye idem tutu esịm ọkpọiso. Jirizie mkpịsị aka gị jiri nwayọ nwayọ Hịa aka ruo ntutu isi. Usoro a bu usoro a choro ka anyi kpoo anya. Iji nyere aka mee ka uru ahụ dịkwuo nro ma nyere aka belata ibu ihu.
6. Esi ida ihu ibu, anyị na-eweta taa. Ọ bụghị na ike, nri? Onye obula nwere otutu uzo ozo, echefukwala ime nkwu ka agwa ibe gi.Hmph !! Maka na anyị ga-atụfu ibu ọnụ ọnụ ^^ hehe ^^